Cindezela Amanuts China Manufacturers & Suppliers & Factory
Cindezela Amanuts - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 15 ye-Cindezela Amanuts)
I-M3 Stainless Steel Press Nuts nge-naylon
M3 Cindezela amaNuts insimbi engenasici ama-Screws ku-Carbon Isingeniso Somkhiqizo Amantongomane wethu wezinsimbi ezingenasici i-M3 anombala wesiliva ne-balck odumile kakhulu emakethe yezinhlaka ze-carbn fiber. Uma udinga ezinye izinto ezifana ne-aluminium, ithusi konke kusilungele. Pls zizwe ukhululekile ukuxhumana...
Cindezela amaNut for Screws kuCarbon
Cindezela amaNut for Screws kuCarbon Isingeniso Somkhiqizo Amantongomane wethu wezinsimbi ezingenasici i-M3 anombala wesiliva ne-balck odumile kakhulu emakethe yezinhlaka ze-carbn fiber. Uma udinga ezinye izinto ezifana ne-aluminium, ithusi konke kulungile ngathi. Pls zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi. Isitokwe nuts...
Ukuthengisa imikhiqizo ephezulu Ikhwalithi Yesimbi Engagqwali
Ukuthengisa imikhiqizo ephezulu Ikhwalithi Yesimbi Engagqwali Isingeniso Somkhiqizo ISITOLO SOKUQEDA KAKHULU: La maNuts yi-100% 18-8 (304) Insimbi Engagqwali okungenye yezindlela eziphakeme kakhulu zezinsimbi ezimelana nokugqwala, okwenza ihlale isikhathi eside kunamanye amaNuts emakethe namuhla. IZINSELELE...
I-Insort Stainless Insert Lock Hex Nut eyenziwe ngokwezifiso
I-Insort Stainless Insert Lock Hex Nut eyenziwe ngokwezifiso Isingeniso Somkhiqizo ISITOLO SOKUQEDA KAKHULU: La maNuts yi-100% 18-8 (304) Insimbi Engagqwali okungenye yezindlela eziphakeme kakhulu zezinsimbi ezimelana nokugqwala, okwenza ihlale isikhathi eside kunamanye amaNuts emakethe namuhla. IZINSELELE ONGAQHAWULA...
I-Best Heain Nut Yokuthengisa Okuphezulu Yekhwalithi ephezulu
I-Best Heain Nut Yokuthengisa Okuphezulu Yekhwalithi ephezulu Isingeniso Somkhiqizo ISITOLO SOKUQEDA KAKHULU: La maNuts yi-100% 18-8 (304) Insimbi Engagqwali okungenye yezindlela eziphakeme kakhulu zezinsimbi ezimelana nokugqwala, okwenza ihlale isikhathi eside kunamanye amaNuts emakethe namuhla. IZINSELELE...
Ikhwalithi ephezulu ye-OEM Stainless Steel Hex Nut
Ikhwalithi ephezulu ye-OEM Stainless Steel Hex Nut Isingeniso Somkhiqizo ISITOLO SOKUQEDA KAKHULU: La maNuts yi-100% 18-8 (304) Insimbi Engagqwali okungenye yezindlela eziphakeme kakhulu zezinsimbi ezimelana nokugqwala, okwenza ihlale isikhathi eside kunamanye amaNuts emakethe namuhla. IZINSELELE ONGAQHAWULA KUZO:...
Umshini wokucindezela umgodi we-Carbon fiber countersunk hole ku-nati m3
Ikhwalithi ephezulu yeCarbon fiber countersunk hole cindezela ku-m3 Hobbycarbon Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium nati ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe-aluminium fasteners. NgesiFulentshi, abantu bavame ukuyibiza ngokuthi i-seranced ngokumelene namantongomane. I-M3 Aluminium Serrated Against Nuts ivame...
Cindezela Amanuts Cindezela amaNuts Cindezela i-Nut Cindezela amaNuts for Wood Cindezela amaNuts for Sheet Cindezela i-Kvt Nut Cindezela amaNuts athengiswayo Amnyama M3 Cindezela Amantongomane